विपन्न समुदायमा ‘न्यानो सुर्खेत’ अभियान – Sajha Bisaunee
विपन्न समुदायमा ‘न्यानो सुर्खेत’ अभियान
। १ माघ २०७४, सोमबार १६:०७ मा प्रकाशित
बराहताल गाउँपालिका–४ का १३ वर्षीय सुवास गुरुङ शनिवार एकसरो लुगाको भरमा भेरी किनारमा रहेको वडा कार्यालयमा आइपुगेका थिए । उनले लगाएको विद्यालय पोशाक पनि निकै मैलो र पुरानो थियो । उनलाई जाडो नलागेर एकसरो लुगाको भरमा हिडेका भने होइनन् । ‘कपडा नै यत्ति छ’ उनले भने, ‘घरमा बस्दा पनि यही लगाउँछु, स्कुल जाँदा लगाउने पनि यही हो ।’
कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण एक सरो लुगाको भरमा गुजरा चलाउँदै आएका उनी वडा कार्यालयबाट घर फर्कदा भने स्वीटर र टोपी लगाइरहेका भेटिए । मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालका बालरोग विशेषज्ञ डा.नवराज केसीको पहलमा सुरु भएको ‘न्यानो सुर्खेत’ अभियान अन्तर्गत न्यानो लुगा पाएपछि सुवासको अनुहार प्रफुल्लित देखिन्थ्यो ।
सुवास मात्रै होइन उनीजस्तै कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण समस्यामा रहेका तरंगाका ४९ जना बालबालिकाले शनिवार न्यायो लुगा पाए । बराहताल गाउँपालिका, नेपाल बाल पोलिक्लिनिक, विंग्स फाउण्डेशन नेपाल र चिल्ड्रेन्स प्याराडाइज स्कुलको समन्वयमा तरंगामा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरसहित न्यानो कपडा वितरण गरिएको थियो । जसबाट
बराहताल गाउँपालिकाको वडा नं. ३ र ४ का ४९ जना बालबालिका लाभान्वित भएका छन् ।
विपन्न बालबालिकाहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई न्यानो लुगाको साथमा कापी र कलमसहित शैक्षिक सामग्री समेत वितरण गरिएको थियो । त्यति मात्र होइन बालरोग विशेषज्ञ डा. नवराज केसीले तरगा पुगेर बालबालिकाहरूको स्वास्थ्य जाँच गर्नुका साथै निःशुल्क औषधि समेत वितरण गरेका छन् । न्यानो लुगा, शैक्षिक सामग्रीसहित निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच र औषधि पाउँदा यहाँका बालबालिका मात्रै होइन उनीहरूका अभिभावक पनि हर्षित भएका थिए । शिविरमा एक सय ४० भन्दा बढीको स्वास्थ्य जाँच गर्नुका साथै निःशुल्क औषधि वितरण गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा डा. नवराज केसीका साथै बराहताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेजबहादुर बस्नेत, महिला तथा बालबालिका कार्यालयका बाल संरक्षण अधिकृत प्रेमप्रकाश आचार्य, विंग्स फाउण्डेशनका सचिव किरण बस्नेत, दिपक गौतम लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
‘न्यानो सुर्खेत’ अभियान अन्तर्गत यसअघि बराहतालकै गिरीघाटस्थित बाढीपीडित शिविरमा पनि न्यानो कपडा वितरण, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको थियो । आगामी दिनमा जिल्लाका अन्य स्थानमा पनि यो अभियान निरन्तर सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ ।